mairie-antananarivo – Fanalana 4-mi
auteur 15 novambra 2017 Commentaires fermés
Sampan-draharaha misahana ny asa sosialy (cua)
Anisan’ny mpandoto sy mpanakorontana ary miteraka tsy fahandriampahalemana eny anivon’ny fiaraha-monina ny fisian’ireo 4-mi izay mitoby etsy sy eroa. Nahavoaray fitarainana avy amin’ny Fokontany Ankadifotsy, Ambodifilao, Analakely… araka izany ny Kaominina Antananarivo Renivohitra ka nanao fidinana ifotony teny an-toerana mba hijery ny zava-misy.
Araka ny nambaran’ny tompon’andraikitra avy eo anivon’ny fari-piadidiana ny Tanànan’Antananarivo Renivohitra fa voarara ny lalàna ny matory an-dalambe sy manao ny maloto eny rehetra eny ka noho izany dia noentanin’ireo ekipa avy ao amin’ny sampan-draharaha misahana ny asa sosialy eto amin’ny kaominina Antananarivo Renivohitra na ny DAS ireo mpatory an-dalana ireo mba hamonjy ny toerana voatokana ho azy ireo. Tonga teny an-toerana nanampy ireo ekipan’ny DAS ihany koa ny Polisy Monisipaly tamin’ny fanalàna ireo 4mi sy ny fanadiovana ireo toerana izay tena hita fa maloto.
Tsara marihana fa ireo izay nanao fitarainana teny anivon’ny DAS dia nahazo fahafaham-po avokoa satria rehefa misy ny fitarainana tonga dia manao ny fidinana ifotony ireo ekipa, saingy tsy maintsy misy kosa ny fiaraha-miasa amin’ireo nanao ny fitarainana mba tsy iverenany eo amin’ny toerana izay nanesorana azy.